ဂျူလီယာ | တစ်ဦးကရထား Save
စာရေးသူ: Yulia Egudin
နေအိမ် > Yulia Egudin
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ ရထားပေါ်မှာ စားလို့အကောင်းဆုံး အစားအစာတွေက တကယ်ကို အရသာရှိလှပါတယ်။. များစွာသောရထား 5-ကြယ်ပွင့်နေရာထိုင်ခင်းများနှင့်ပထမဦးဆုံးအတန်းအစားအစားအစာပူဇော်သောကြောင့်. ဤလောက၏နာမည်ကြီးစားဖိုမှူးများကဖန်ဆင်းအစားအစာပါဝင်သည်. You are probably used to reading about the amazing food in train stations or beautiful…
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ ကမ္ဘာပေါ်တွင်အရှည်ဆုံးရထားခရီးစဉ်သည်အလွန်ရှည်လျားသည်! ဤရွေ့ကားခရီးရက်ပေါင်းများစွာ ယူ. မိုင်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏အဖုံးကိုလို့ရပါတယ်. ဒါကြောင့်, ဤနေရာတွင်ဥရောပတိုက်တွင်အရှည်ကြာဆုံးယူသောခရီးများမှာ, အာရှတိုက်, သြစတြေးလျ, နှင့်အမေရိကန်. ဤဆောင်းပါးသည်ပညာပေးရန်ရေးသားခဲ့သည်…
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ Bernina Express သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အလှဆုံးရထားခရီးစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်. ပထမဦးဆုံးအနနေဲ့, Dombas မှ Andalsnes သို့ Rauma လိုင်းတွင် (နော်ဝေ), သငျသညျမြင့်ထိပ်၏အမြင်များကိုခံစားနိုင်ပါတယ်. ထို့အပွငျ, သငျသညျ Rauma ဖြတ်သန်းအဖြစ်သင်သည်တောင်စောင်းနှင့်ကုန်းပြင်မြင့်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်…